तिथि मेरो पत्रु » कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ : जीवन मा नयाँ पट्टा
द्वारा क्लेयर कुक
कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ : जीवन मा नयाँ पट्टा
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 21 2020 |6मिनेट पढ्न
आफ्नो विवाह ट्रयाक मा फिर्ता मिल्यो सम्म मेरो भाइ माइकल मलाई संग बसिरहनुभएको थियो.
“छैन तपाईं Molly के उहाँलाई coddle, सारा,” मेरो बुबा भने. “बस उसलाई तीन वर्ग एक दिन दिन र त्यो कार्यालय गर्न लगाउने एक starched सेतो शर्ट छ सुनिश्चित।”
“उहाँले यति रूपमा एक बियर बोतल मा देखिन्छ भने, आफ्नो सेल फोन लुकाउन,” मेरी बहिनी क्यारोल भने. “के छैन, कुनै पनि परिस्थितिमा, उहाँलाई रक्सीले मातेको चांद डायल गरौं. त्यो उनको विवाह गर्दा तिनी एक राजधानी बी संग एक चुडैल थियो, हामी उनको प्रतिस्थापन फेला र त्यो एक राजधानी बी संग एक चुडैल हुनेछु।”
“किन आफ्नो घरमा बस्न माइकल पार्छ?” मेरी बहिनी क्रिस्टिनलाई भने. “हामी कोठा धेरै छ, र कुनै अपराध, तर यो तपाईं सधैं उहाँलाई हग गर्ने मार्ग त निष्पक्ष छैन।”
महिनापछि, शायद वर्ष, त्यो घर मा बस्ने जबकि मिलेर उहाँको विवाह पकड प्रयास, माइकल अभाव हुनेछ भन्ने आशा, वास्तवमा, चांद हृदय fonder बढ्न बनाउन. त्यसैले तिनले बाहिर गए र अब उनी छोरीहरू चलाए, एनी र Lainie, स्कूल पछि बुधवार मा आइरिस कदम नृत्य गर्न पछि खाने तिनीहरूलाई बाहिर लगे र. तिनीहरू पनि उहाँलाई हरेक सप्ताह खर्च.
“तपाईं यो हुनेछ लाग्छ कति लामो?” यूहन्ना एन्डरसन अन्तमा सोधे. यो मेरो महत्वपूर्ण अन्य भएका मानिसबाट व्यावहारिक प्रश्न देखिन्थ्यो.
“नरक freezes मा पनि निराशावादी लाग्न सम्म गर्छ?” म जवाफ.
हाम्रो सम्बन्ध एक कच्ची सुरु गरेपछि, यूहन्ना र म डेटिङ आनंद को छ महिना साझा थियो. हामी पकड मा मूलतः अब थिए. हामी यस मार्फत प्राप्त गर्न पर्याप्त आनंद अंक अर्जित चाहन्छु भने म रात को बीचमा कहिलेकाहीं सोच्नुभएको. र परम एक शैल्फ जीवन थियो? हामी प्रशंसक गर्नुअघि यो एक नियमित आधार मा ज्वालाले फेरि बेवास्ता को यस्को अवधि समाप्त हुनेछ?
आज रात, मेरो भाइ माइकल र म मेरो ओछ्यान मा फिर्ता लात हाने. सुक्खा सफाई बैग मा starched सेतो शर्ट को एक अध्यायको लायक मेरो ट्रेडमिल मा लिपटी थिए. दुई खाली सैम एडम्स बियर बोतल कफी टेबल मा एक आधा-खाएको चीज पिज्जा flanked. म एक असल बहिनी थियो.
“राम्रो,” माइकल भने.
“धन्यवाद,” म भने.
सप्ताहांत मा, माइकल र एनी र Lainie र म मेरो rickety पुराना अटारी सिढी झिकेर खेलौनाहरू लागि एक शिकार मा गएका थिए. मेरो भतीजियों मेरो बाल्यकाल को अवशेष संग अचाक्ली प्रभावित थिएनन् र तल ओर्लेर फिर्ता थिए र कुनै समय मा सेल फोन खेल मा गुमाए. जाहिर मेरो भाइ अन्यथा महसुस, अहिले किनभने उहाँले मेरो बढ्दो माथि कप्तान गुडिया संग खेल थियो.
“उनले एक दुई गुडिया छ, दुई गुणा धेरै मजा लागि!” म 1970 व्यापारिक मेरो peppiest अनुकरण recited.
कप्तान बार्बी गरेको सानो बहिनी थियो. दुई मानयो गरिएको थियो भन्ने हाम्रो बाल्यकाल को Doublemint जस्तै, दुई, एक दुई टकसालों, कप्तान को यस संस्करण साँच्चै एक दुई गुडिया थियो. तपाईं पहिलो तिनलाई देख्दा, त्यो एक मिठाई सानो गोरा प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी हुन देखा पर्नुभयो. तर तपाईं फिर्ता तिनको बायाँ हात घुमाएर भने, त्यो वास्तवमा सही आफ्नो धेरै आँखा अगाडि छाती भयो.
रूप बार्बी गरेको असम्भव शरीर मेरो वर्षहरूको मा पर्याप्त मलाई खराब थिएन भने. कप्तान हुर्कनु धन्यवाद, म मेरो राती प्रार्थना भन्दै मेरो ओछ्यानमा छेउमा घोप्टो परिन् गर्दा म एक-सशस्त्र backstroker जस्तै पिछडिएका मेरो बायाँ हात circling मेरो prepubescent जीवनको एक वर्ष कम्तीमा खर्च चाहन्छु. परमेश्वरको चीन मा आमा र बुबा र मेरा तीन जना भाइ र दुई बहिनीहरू र सबै जलेको छोराछोरीलाई आशिष् मागेपछि, म स्तन लागि प्रार्थना, मेरी बहिनी क्यारोल भन्दा ठूलो, जो थियो दुई वर्ष ठूलो र, परमेश्वरलाई खुसी, मेरो सत्र-महिना बहिनी क्रिस्टिनको माथि देखाए अघि आइपुगेका.
“हामी पर्छ, हामी पर्छ, हामी हाम्रो बस्ट वृद्धि हुनुपर्छ,” उहाँले माथि र तल बढ्दो माथि कप्तान गरेको बायाँ हात पंप रूपमा माइकल यी सबै वर्षपछि मलाई छेउमा भन्नुभयो. उनको स्तन देखा पर्नुभयो र आफ्नो मन्त्र गर्न सही समय मा गायब.
“यो बन्द Knock,” म भने. म मेरो पुरानो गुडिया लागि पुगेको.
माइकल दूर उनको yanked. “कसले मलाई बनाउन वाला छ?”
“मलाई उनको दिनुहोस्,” म कप्तान लागि lunged रूपमा म आएकोछु. पुरानो बानी कडा र सबै मर्छन् कि, तर यो मेरो भाइबहिनी र म एक nanosecond हाम्रो बाल्यकाल आफु उल्टाउन सक्छ बाटो साँच्चै अद्भुत थियो.
एक जोर छाल मलाई हाम फाल्ने गरे. मदर टेरेसा, प्रनिलको humongous सेन्ट. बर्नार्ड, नरक मा जम सम्म चांद उनको सम्झना वा सम्म जो पनि मेरो साथ बसिरहनुभएको थियो, कप्तान समाते माथि बढ्दो.
माइकल आफ्नो खुट्टामा उफ्रेको. “मदर टेरेसा, यो ड्रप।”
उनले एकदम परे विकसित थिएन केही पुरातन शिकार-हत्या अनुष्ठान उनको टाउको हल्लाउँदै रूपमा मदर टेरेसा उनको दाँत बीच कप्तान गरेको बायाँ हात आयोजित. गुडिया छाती देखा पर्नुभयो र प्रत्येक हिला संग गायब.
म भान्साकोठामा भाग्यो र doggie उपचार जार समाते. म एक हड्डी आकारको बिस्कुट बाहिर आयोजित.
मदर टेरेसा एक भौं हुर्काउने देखा.
म भुइँमा पहिलो उपचार राख्नु र जार देखि दोस्रो एक लिए.
त्यो अर्को हिला कप्तान हुर्कनु दिए.
“ठीक,” म भने. “तर निष्पक्ष चेतावनी, म तीन मा लाइन नजिक छु।”
मदर टेरेसा बिस्तारै भुइँमा कप्तान हुर्कनु राखिएको र उनको तीन व्यवहार संकलन.
“राम्रो केटी,” माइकल भने.
“त्यो बहस हो,” म भने. म मेरो लार छोपेको गुडिया उठाउनु र मेरो जीन्स मा उनको नामेट पार्न सुरु. म पुनः र पिज्जा न्याप्किन समाते.
“यहाँ, म प्राप्त,” माइकल भने.
म कप्तान र न्याप्किन हुर्कनु हस्तान्तरण र ओछ्यान मा तल plopped.
माइकल फिर्ता rhythmically तिनको बायाँ हात पम्पिंग अप कप्तान बढ्दो पहिरन र समाप्त भएको थियो.
म मदत गुहार माग्दै थियो थाह थियो. म मेरो sisterly कर्तव्य मान्यता. म कप्तान हुर्कनु आफ्नो मन बन्द प्राप्त चाहन्छु, त्यसपछि म चांद आफ्नो मन बन्द प्राप्त चाहन्छु. म एक खुला न्यूनतम गर्न एनी र Lainie मा नकारात्मक प्रभाव राख्न प्रयास गर्दा उहाँलाई आफ्नो विवाहको मा थियो महसुस र आफ्नो छोडपत्र नेभिगेट उहाँलाई सहायता मदत चाहन्छु. त्यसपछि मैले उहाँलाई एक अधिक उपयुक्त म्याच मिलन चाहन्छु. जस्तै नै म सबै दूर वर्ग कि मिल्यो रूपमा, यूहन्ना एन्डरसन र म सँगै आनंदित सूर्यास्त मा बन्द सवारी हुनेछ.
“म यो मा प्याक लाग्छ,” माइकल भने. “तपाईं मलाई एक पल्ट बाहिर मदर टेरेसा लिन चाहनुहुन्छ, तपाईं ओछ्यानमा लागि टाउको अघि वा तपाईं उनको प्राप्त गर्न सक्छन्?”
मदर टेरेसा मा निर्भर र मेरो गालामा lapped. म खुल्छन्. “म उनको लिन्छु।”
माइकल दुःखी आधा-लहर दिनुभयो. “G'night, सारा. रात, मदर टेरेसा।”
उहाँले अतिथि कक्ष तिर आनन्दमय कदम चाले.
“माइकल,” म भने.
तिनले वरपर फर्केर. माथि कप्तान आफ्नो काखमा cradled थियो बढ्दो.
म मेरो हात आयोजित. “मलाई गुडिया दिनुहोस्, माइकल।”
म एक समयको लागि त्यहाँ बसे, उनको नयाँ मनपर्ने ठाउँ मा scratching मदर टेरेसा, सही तिनको बायाँ कान पछाडि. त्यसपछि म उठे र मेरो पूर्व मालिक बेडरूम tiptoed, म एक कार्यालय परिणत चाहन्छु र म परियोजनाहरुमा काम कहाँ र मेरो कक्षा लागि अतिरिक्त कुराहरू भण्डारण जो.
म तल आले मा स्क्रापबुकहरू एक चाङ माध्यम rummaged. म मेरो विवाह एल्बम बाहिर झिकेर, एक हातले यो बन्द झाडा, एक पल को लागि यो आयोजना. म मेरो आँखा बन्द र केभिन कल्पना गर्न प्रयास, मेरो पति. म आच्छादित सक्छ सबै मानिसको एक अस्पष्ट छवि एक शौचालय सीट मा बसिरहेका थिए, उनको टाउको अखबार पछि लुकाइएको, आफ्ना हात र खुट्टामा उनको प्यान्ट, खुला बाथरूम ढोका. केभिन अब एक iPad मा आफ्नो बिहान समाचार पढ्न भने म सोच्नुभएको.
अन्तमा, म डेटिङ दृश्य नेभिगेट बेला म पालन चाहन्छु नोटबुक फेला. मेरो मिति प्रत्येक लागि एक पृष्ठ, हात-आकर्षित तारा र झण्डा संग मूल्यांकन गरियो. यो एक कार डीलरशिप मा एक बिक्री जस्तै देख्यो कि पृष्ठ को सबै भन्दा माथि भर त्यसैले धेरै रातो झण्डा billowed. Hanover देखि जर्ज, जो सम्बन्ध एक दिन एक महिना खोजिरहेको थियो, कुनै तार, कुनै प्रतिबद्धता. म हुनेथियो, आफ्नै Alfalfa अंकुरित भयो. एक प्लस आकारको नारी लागि देख मान्छे, म त्यो नारी पूंजीकृत बाटो मनपर्थ्यो किनभने म छोटकरीमा आंशिक छलफल चाहन्छु जसलाई, तर म धेरै खान सक्थे ज्यादातर किनभने. रे Santia, म चाहन्छु पूर्व लगभग हकी तारा लगभग सुत्थ्यौं. बब धक्का, म संग सुतेको हुँदैन एक विद्यार्थी बुबा.
यो वहाँ बाहिर एक जंगल थियो. गरिब माइकल. तर म मेरो घर बाहिर र आफ्नो आनन्दित बाटो उहाँलाई प्राप्त भएन भने, म यो थाह अघि म बाहिर त्यहाँ फिर्ता हुन सक्छ.
म विचार मा कंपकंपी एक पल लिए. त्यसपछि म र मेरी बहिनी क्यारोल मेरो लागि राख्नुभएको थियो व्यक्तिगत विज्ञापन फेला, एक पेज को केन्द्र मा टेप.
Voluptuous, कामुक, लोभलाग्दो र रमाइलो. बल्लतल्ल 40 DWF starlit रात साझा विशेष मानिस खोज्ने. कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ.
म जीवित कोठा बाहिर मेरो डेटिङ नोटबुक गरे, मेरो मनपर्ने रातो पेंसिल संग. म मेरो भाइ अनुरूप विज्ञापन tweaked गर्दा म एक ताजा कलेज-लहरै पेज फर्केर मेरो दाँत विरुद्ध रबड टकटक.
Buff, शानदार, बिग्रेको तर मरम्मत परे. चाँडै सबै आफ्नो कपाल DWM गर्न सुन्दर आफ्ना छोरीहरू भेट्छन् गर्ने विशेष महिला खोज्ने’ उच्च स्तर. ठूलो slobbery कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ.
(क्लेयर कुक के नवीनतम पुस्तक देखि अनुमति मुद्रित 'कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ – जीवन मा नयाँ पट्टा’ – पुस्तक2सबै भन्दा राम्रो बेच को कुकुर श्रृंखला प्रेम गर्नै पर्छ. तपाईं मा क्लेयर र उनको किताबहरु बारेमा थप जानकारी पाउन सक्छन् www.clairecook.com)
एक पहिलो तारीख लागि ड्रेसिंग
5 विचार रोमान्स पुनर्जन्म